အသက် ( ၂၀ ) ကျော်ပြီဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ – Aung Par Say
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုကျော်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူကြီးတစ်ယောက်လဲမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီအချိန်ဟာ ဘ၀ရဲ့ရွှေရောင်အတောက်ပဆုံးအချိန်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါကြောင့် အသက်ရှင်ရကျိုးနပ်စေမယ့် ဒီအချက်လေးတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလဲ ? သူတစ်ပါးအပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှီခိုကင်းခြင်း၊ လွှမ်းမိုးမခံရခြင်း၊ အကောင်းမြင်စိတ်၊ သဘောထားပြည့်ဝြခင်း၊ ပွင့်လင်းခြင်းတို့ အချိုးကျ
ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ ကိုယ့်ဆီကပဲလာပါတယ်။ တခြားသူကကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့တော့။
မင်းအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ မင်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုထက် သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးရတာများလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်ဘ၀မှာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အနည်းငယ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပါ။
ဘယ်လိုလူမျိုးအဖြစ် ဘ၀ကိုရပ်တည်ဖို့စဉ်းစားထားပါသလဲ ? မင်းကဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအစပျိုးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ကိုယ်ရူးသွပ်ရတဲ့ စိတ်ကူးထဲကအလုပ်ကို ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင် လက်တွေ့ဆန်ဆန်ကြိုးစားပါ။
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးထွက်ပါ။ ဒါကဘ၀ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံတွေကိုရနိုင်မှာပါ။ သူစိမ်းတွေကို ပြုံးပြပြီးဖော်ရွေလိုက်စမ်းပါ။ မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာကရှုခင်းတွေကို ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်စမ်းပါ။အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ လေလာရာကိုရွက်လွှင့်လိုက်စမ်းပါ။ဒီအရွယ်မှဒါတွေကိုမလုပ်ရင် မင်းအသက် ၃၀ကျော်တဲ့အခါရုံးခန်းထဲကကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး နောင်တရနေပါလိမ့်မယ်။
မင်းကျောင်းပြီးသွားတာနဲ့ ဒီသူငယ်ချင်းတွေကို နေ့တိုင်းတွေ့ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။ ရည်းစားနဲ့အဆင်မပြေတိုင်း တိုင်ပင်ရမယ့်သူ၊ မင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလာမယ့်သူ၊ မင်းရဲ့ သမီးလေးမွေးနေ့ကိုလာမယ့်သူ၊ အလုပ်ခွင်မှာစိတ်ညစ်ရတိုင်း ရင်ဖွင့်ရမယ့်သူ၊ ယုတ်စွအဆုံး ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ရင် ကူညီမယ့်သူဟာ ဒီသူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီသူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်ပေးနိုင်တုန်းမှာ တန်ဖိုးထားကြရအောင်။
အိမ်မှာလူကြီးတွေမရှိတဲ့အချိန်ဆို အလွတ်လပ်ဆုံးပဲမလား ? ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါပြီ။ မိဘရင်ခွင်ရဲ့အဝေးမှာ အခက်အခဲတွေလဲရှိသလို အတွေ့အကြုံကောင်းတွေလဲ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုအကောင်းအဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို တည်ဆောက်ရမှာပါ။
၆. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ပါ၊ အချစ်ခံပါ။
အသက် ၂၀ မတိုင်ခင်ကတွေ့ခဲ့တဲ့အဆက်ဟောင်းတွေကြောင့် အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးလို့ယုံကြည်မထားပါနဲ့။အချစ်ခံရဖို့ အထူးတလည်ကြိုးစားနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၇. အရမ်းလိုချင်နေတဲ့အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရယူဖို့ခက်ခဲလေ ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစကိုအသုံးချရလေပါ။ ပိုင်ဆိုင်ရတာနဲ့အမျှကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုပိုတတ်လာတာကို အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဒါဟာ လူငယ်တစ်ယောက်မှရှိသင့်တဲ့ အတ္တ သို့မဟုတ် အစွမ်းအစတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ မင်းမသိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူနဲ့ပြောဆိုရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မသိသေးတဲ့အရာတွေကိုပွင့်လင်းစွာမေးပြီး လိုအပ်တာကို ရိုးသားစွာတောင်းဆိုပါ။ ဒီလိုမေးမြန်းတောင်းဆိုပိုင်ခွင့် မင်းမှာအပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းပုံ တို့သာမက ပညာရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး ကျန်းမာရေးတို့ကိုပါ ဂရုစိုက်ပါ။ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မစောင့်ရှောက် မထိန်းသိမ်းခဲ့ရင် အသက် ၄၀ မှာ နောင်တရရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအရွယ်မှာ ခန္ဓာဗေဒဖြစ်စဉ်တွေက နောက် ၁၀ နှစ်ထပ် ၁၀ ဆပိုမိုကောင်းမွန်နေသေးတဲ့အတွက် အရသာရှိတာအများကြီးကိုစားလို့ရပါသေးတယ်။ကိုယ်စားချင်တာကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့သင်ယူပါ။ မတူညီတဲ့အစားသောက်နဲ့ အရသာတွေကို မြည်းစမ်းပါ။
အပေါင်းအသင်းဆိုးတစ်ရာ ထပ် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ကပိုသာပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀ကလို အနိုင်ကျင့်တတ်သူ အကျင့်ဆိုးရှိသူတွေကို ရှောင်ပါ။
၂၀ ကျော်အရွယ်မှာ အလုပ် တစ်ဖက်နဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ကနှစ်မြှပ်နေဖို့လွယ်ပါတယ်။ ဒါကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀လား ? ရေရှည်အနေနဲ့ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ ? ဒီအရွယ်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ နောက်ကျမှသာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘ၀ကို သိမယ်ဆိုရင် ဒီအသက်အရွယ်မှာသာ ရှိနိုင်တဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ခွန်အား၊ ငယ်ရွယ်မှုတွေကပြန်မရနိုင်တာ့ပါဘူး။
Crd Prospect Myanmar
← မွေးချင်းထဲမှာ အငယ်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း တန်းသိစေနိုင်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
ကိုဗစ်ကြောက်လို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကိုဈေးဝယ်ခိုင်းတယ် အဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားက တအိမ်လုံး Pဖြစ်နေတာကို ကြိတ်ကုနေကြတယ် ဒီမိသားစုလေးရဲ့ဖအေကစဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်လေးအထိကူးစပ်ကုန်တယ်ဒီအရွယ်လေးတွေကို ပို့ပေးရမှာတဲ့ဗျာ →